Ntuliaka UN: Mohammad-Bande abụrụla onyeisi UNGA | odumblog
posted on Jun. 19, 2019 at 9:11 pm
Na nzukọ ndi ‘United Nations’ nwere na ‘New York’ n’ụbọchị Tuzdee, a họputara Tijjani Muhammad-Bande dika onyeisi ‘United Nations General Assembly’ (UNGA). Muhammad-Bande bụ onye na-anọchi anya Naijiria na ‘United Nation’.
Ahmed Abubakar onye ntuziaka ‘National Intelligence Agency’ bụ onye nọ mgbe emere nhọpụta a. Ọ kọwara na nhọpụta a emere bụ maka nnukwu amamihe Muhammad nwere dika onye nnọchite anya gọọmenti. O kwukwara na mgbe emere nhọpụta a, ezigbo ọṅụ juputata ebe ahụ. Nke a ka o kwuru gosiri na Naijiria bụ obodo di ike n’ezie.
Otu di iche iche kwunyere nhọpụta a emere. Otu ndi gunyere ‘Economic Community of West African States (ECOWAS)’, ‘African Union (AU)’ na Afrika niile n’ihi ụdị amamihe nwoke a nwere. Nhọpụta a emere Mohammad-Bande bụ nnukwu ihe ọnụ nyere Naijiria na Afrika.
Ihe mere m ji ahọrọ ụmụnwanyị dika minista akụnụba nke Naijiria: Buhari
Odum Blog18 hours ago